पृथ्वीनारायण शाहले गरेको कार्यलाई नराम्रो हो भन्नुहूँदैन, उनको समयबाट नै नेपाल भन्ने देश बन्यो ।
र अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, तर खै किन हो, कता कता, केही कुरा मिलिरहेको छैन, देश अगाडि बढिरहेको छैन ।
There is no space for ex-kings and their bharautes. Shut up and see the change.
नेपालमा राजतन्त्र हुँदा नेपाल राम्रो थियो भन्न सक्दिन तर स्थितिले के देखाँउदै छ भने कुनै दिन "राजतन्त्र छँदा, नेपाल पनि थियो" भन्नु पर्ला जस्तो छ ।
नया नेपालको नाममा केहि परिवर्तन आउला भन्ने मलाई पनि आश थियो तर अहिले लाग्दैछ उनिहरुको 'परिवर्तन' भनेको नेपालको सिमा रेखालाई चिरा चिरा पारेर 'पुरानो नेपाल' छुट्टै र 'नया नेपाल' छुट्टै बानाउनु नै हो ।
प्रसाई जी म राजावादि होईन तर यथार्थवादि भने पक्कै हुँ ।
अहिलेको नेपालको लथालिंङ स्थितिलाई हेर्दा तपाईको आलेखमा खोट लगाउने कुनै ठाँछउ छैन ।
कुहिराका कागहरु हुन जनता र यिनलाई हाक्ने नेताहरु, केहि गर्न जान्दैनन कराउन र भडकिन मा अब्बल छन । भत्काउनमा बांदर र पुर्वि तराइतिरबाट पस्ने हात्ति भन्दा पनि माहिर छन् ।
अहिलेको स्थीती र पुरानो स्थीती दाज्दा के भन्ने के नभन्ने जस्तो छ। समग्रमा आकार,ठरकी र पान्डाको कुरा एकै ठाउंमा राखे मेरो बिचार तेही हुन्छ। अहिले यस्तो स्थीती छ, आफुलाइ उंचो राख्न भुत,भविष्य जता पनि यात्रा गर्छन। नत यिनीहरुले बिगतमा भएकासंग दाज्न सक्छन न त यिनीहरुले भविष्यमा आकेका कुरा पुर्याउन सक्छन।
पक्का पनि हो कुरो मिलीरहेकको छैन,बांदर र हात्ती जसरी यिनीहरुले लथालिंग पारेका छन।
नेपाल एकिकरण प्रीथ्वी नारायण शाहको दूरदर्शीताको कारणले भयो या साम्रज्यबादी सोचको कारणले भयो, त्यो कसले जांच्ने? ससुराली राज्य मकवानपुर् जांदा चन्द्रागिरीको डाँडोबाट झिलिमिली बैभवशाली काठमान्डौं देख्दा, "आहा, यस्तो ठाँउको राजा हुनु पो राजा हुनु" भनेर इतिहासमा लेखिएको छ, त्यो अंग्रेजले लेखिदियो या कसले लेखिदियो थाहा छैन। धनी, बलियो राज्यको राजा हुने सोचलाई हाम्रा इतिहासकारहरुले "दूरदर्शीताको" राम्रै लेप् लगाइदिएका छन्। यदि यिनी सांच्चिकै दूर्दर्शी राष्ट्रनिर्माता थिए भने किर्तीपुरेहरुको नाक् काटीने थिएन, जयन्त राणाको जिउदै छाला काढिने थिएन र आफ्नै सहयोगी पाटने प्रधानहरुको हत्या हुने थिएन।
जे होस मेरो जन्म मेरो बाबूले आमालाई माया गर्दाको कारणले भयो या बलात्कारको फलस्वरुप भयो भनेर खोजिरहनु जरुरत् छैन।प्रीथ्वी नारयण शाह् इतिहास थिए र तिनका शालीक तोडफोड गरिनु कुनै जरुरी थिएन तर प्रिथ्वी नारयण शाहका उत्तराधिकारीप्रतिको ब्रितिष्णानै मुख्य कारक हो। लेखकलाई अझै लाग्दै छ, राजसंस्थाले नेपाली राष्ट्रियताको सरंक्षण गर्ने थियो, नेपाली एकता अक्षुण् राख्ने थियो। वास्तवमा राजसंस्थाले त्यो गर्न सक्थ्यो तर गरेन।नेपाली राष्ट्रियता यति कमजोर हुनुमा र नेपाली एकता टुटनूमा यहि राजसंस्था र यसको वरीपरी घुम्ने हुके, बैठके, ढोकेहरुहरुनै जिम्मेवार छन्। जनता दिन पर् दिन गरीब् हुदै गए, राष्ट्र दिन पर् दिन गरीब् हुदै थियो तर राष्ट्रियताका ठेकेदारहरु मोटाउदै गए। भोको पेटलाई राष्ट्रियता कुराको के अर्थ? दीपेन्द्र-पारस जस्ता राज-उत्तराधिकारीहरुले कसरी राष्ट्रियताको सरंक्षण गर्थे होलान्?
२४० बर्ष शाहबंशले शासन् गरेको नेपाल कहाँ छ? बिश्वमा सबै भन्दा गरीब राष्ट्रहरुको पंक्तीमा सबै भन्दा अघि छ। मेरी छोरीको कक्षामा एक दिन शिक्षकले प्रसंगबस भनेछन् nepal is one of the poorest country in the world चार् कक्षामा पढने मेरी छोरी भन्दै थिईन् baba, I was so embarassed
यो नेपाललाई गरीब बनाएको हिजो-आजका कम्युनिष्टहरुले हो? छोड्दिनुस् यो इतिहासका कुरा भजाएर बर्तमानलाई कंगाल् बनाउने कुरा।जनता अब आफ्ना हक अधिकार प्रति सचेत भएका छन्। बर्सौंदेखि थिचिएर, पिल्सिएर रहेका जनता अहिले उन्मुक्त वातवरणमामा हक अधिकारका कुरा लिएर बाहिर निस्कदा हाम्रो राष्ट्रिय एकता भावना खलल् हुने हो कि भनेर कोकोहोलो गर्न पर्दैन। भारत शसुराली हुने, अनि सिङापुरमा बसाइ सर्ने हिसाबले घर किन्ने ति शाहबंशीको पक्षमा यो राष्ट्रियताको चिन्ता किन? राजसंस्थाले देशलाई सिक्किमीकरण वा भूटानीकरण् हुनबाट जोगाउथ्यो भन्ने कुरो मिथ्या हो। २००७ सालमा राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिनु र भारतमा गएर नेहरुलाई "अब नेपाल भारतले लिए हुन्छ" भनेर भन्नु नै काफी छ।सबैले भारतसंग अवसर अवसरमा डील गरेका छन् आफ्नो सत्ताको आयू लम्ब्याउन-त्यसमा राजसंस्था अछुतो छैन।
नेपालमा भएको समस्याको एक टुक्रा लेख देखी कमेन्ट सम्म पढ्दा पुरै झुल्कीन्छ। मैले आफ्नो बिचारको प्रतीनीधित्व नगर्नु भनेको त होइन।बिचार यस्तै बस्तु जस्ले भइराखेको प्रक्रियाको चित्रण गर्दछ।
नेपालको घटनाक्रम हेर्दा के लाग्छ भने त्सले मान्छे कुट्यो मैले हात भच्न के भयो र? अर्को आउंछ उसले हात भाच्यो मैले खुट्टो भाच्न के भयो रे? यसरी नै देशले कुटाइ देखी सबै यातना सहंदै आएको छ। कसैलाइ मतलब छैन देशको ब्यथा के हो? झन बहुदल आए पछि त भाषणमा देश बिकास गरे पुग्दछ। जनताको जिबन स्थर सुधार्ने के ल्याउने कसरी ल्याउने त्यो सधै अपुग हुने गर्दछ। यस्तो बेलामा मलाइ एक जना मुस्तागंका गोठालाको कुरा याद आउंछ। ०५१ सालको चुनाव ताका उनले भनेका थिए " हामीलाइ बिकास चाहिन्छ" खोइ त्यो मुस्तांगमा कहिले बिकास जाला?
Brilliliantman71 जी ले भनेको कुरामा सबै नै सहमत होलान, शायद लेखक पनि । तर के अझै पनि गल्ति माथि गल्ति गर्दै जाने ? राजाले ठग्यो , पृथ्वी नारायण पछिका राजाहरु सबै पेन्डुलम बने । दुनीयामा कहिका पनि राजाहरु विकास गर्न नभएर त्यतिबेलाको परिपाटि अनुसार जित्नेले राज गर्ने मान्यता अनुसार चलेका थिए र जसले जित्छ उसले राज गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा थिए ।
गर्ने ले गरे होलान तर धेरैले मोज नै गरे।
मलाई राजतन्त्र मन पर्दैन चाहिदैन पनि, तर जनताको छोराको नाममा एउटा राजाको ठाउंमा १०० वटा राजा आउंछन भने त्यसलाई स्विकार्न पनि सकिदैन ।
मेरो सरोकार अब राजतन्त्र संग छैन, किनकि बितिसकेको र नेपालमा इतिहास भैसकेको कुरालाइ अझै पनि ऊचालिरहनु भनेको राजतन्त्रको अस्तित्वलाइ नकार्न नसक्नु हो ।
"नेपाल एकिकरण प्रीथ्वी नारायण शाहको साम्रज्यबादी सोचको कारणले भएको भए पनि र देशको जन्म बाबूले आमालाई माया गर्दाको कारणले भए पनि या बलात्कारको फलस्वरुप" भए पनि अब ब्रिलियन्टम्यानजीले भने जस्तै यो खोजिरहनु जरुरत् छैन।
अंग्रेजले एकिकरण गरेको भारतले अहिले पनि शानसित गणतन्त्र दिवस मनाउछ, किन हामीलाई आफ्नो देशको एकिकृत स्वरुपलाइ स्विकार्न हिच्किचाहट हुन्छ ?
के राजाको नाम जोडियो भन्दैमा देशको राष्ट्रिय पर्व नै घृणित हुन्छ?
कि त हामी प्रोपागाण्डा र हंगामायुक्त इस्यु बिना बाच्न सक्दैनौ कि त यति असंतुष्ट छौं कि हामी कहिले पनि संतुष्ट हुन सक्दैनौं ।
मरिसकेको राजतन्त्रको बहानामा देशलाई थिलो थिलो बनाउने प्रवृति कदापि राम्रो हुदैन र यसले देशको विकास पनि गर्दैन ।
जब सम्म जनताहरु कुहिरोबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन तब सम्म देशमा कुनै परिवर्तन आउंदैन, प्रचण्डलेनै भनेका थिए, जनता राम्रो भए नेता राम्रो हुन्छ । जनताहरु जब सम्म कुहिरोको काग बनिरहन्छन तब सम्म बिरेन्द्रको ठांउ मा ग्यनेन्द्र, ग्यानेन्द्रको ठाउंमा प्रचण्ड वा गिरिजाहरु आइरहन्छन, अरु कुनै परिवर्तन हुदैन ।
कि त हामी प्रोपागाण्डा र हंगामायुक्त इस्यु बिना बाच्न सक्दैनौ कि त यति असंतुष्ट छौं कि हामी कहिले पनि संतुष्ट हुन सक्दैनौं
panda ji ko yo bhanai chhai dami lagyo. It is totally right मरिसकेको राजतन्त्रको बहानामा देशलाई थिलो थिलो बनाउने प्रवृति कदापि राम्रो हुदैन र यसले देशको विकास पनि गर्दैन
yeha ta arulai naramro dhekayera afu ramro hune prabirti chha.
निश्चितरुपमा एउटा राजाको बदलामा अरु सयजना राजालाई स्वीकार गर्न सकिदैन। यहाँ कुनै राजा टिक्न सक्दैनन् भन्ने कुरो नया राजा बन्न खोज्नेहरुले पनि बुझ्नु पर्ने हो। प्रसाईजीले भने जस्तो माओबादीहरु एकाएक बाह्रबर्ष अघि प्रकट भएका होइनन्, यो त हाम्रो सदियौंदेखिको सामन्ती राज्यब्यबस्थाको उपज हो, बरु राजसंस्थाले प्रजातन्त्रबादी दलहरुको बिरुद्धमा माओबादीहरुलाई देखा अनदेखा गरी हुर्किन मद्दत गरेकै हो। राजसंस्था राष्ट्रबादी र पार्टीहरु चांहि अराष्ट्रबादी भन्ने कुरो राजाबादीहरुले फैलाउने झूटो प्रचार हो। देशको ढुकुटी रित्याएर बिदेशको खातामा अरबौं रकम जम्मा गर्ने त्यस्ता राष्ट्रबादीलाई जनताले चिनिसके।
समय आँउछ, बिधि बिधान संस्कार बन्न बस्न समय लाग्छ। बीपीले भने जस्तो राजा नभए देश् रहदैन भन्ने कुरो पुरानो भैसक्यो।तर हाम्रा नेताहरुले जे मा पनि भारतले के भन्ला के गर्ला भनेर मुख ताक्ने प्रब्रितिको अन्त्य गर्नु पर्छ। आफूमा आत्माबिश्वास हुन पर्छ।नेपाली जनताको शक्तिको अगाडी भारतले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरो त भारतीय दूत करणसिंह को डील फेल भएबाट पनि बुझिन्छ। भारतको cultural king देखि baby king सम्मको चाहाना गिरिजा प्रसाद कोइराला-सुजाता कोइरालाहरु मार्फत द्वारा प्रकट भएको होइन र?